> Resource > Free > Top 5 Free Data Recovery Barnaamijyada
Faylal lagu lumin karaa ka your computer ama qalab kale oo loogu talagalay mudooyinka kala duwan, sida tirtirka, formatting, weerar virus ama qalad nidaamka. Marka files yihiin laga badiyay, waxaa jira 3 xal aad u iyaga u soo ceshano:
Kabsado files lumay kaga imaanayo Falanqeynta haddii aad leedahay;
Kabsado xogta tirtiray ka Recycle Bin (Windows PC) ama Trash (Mac), haddii ay tahay in aan la gebi ahaanba ka shubeen,
Hel software kabashada xogta.
In na soo maray, labada xal hore la mid ma aha waxtar leh, waxaannu filaynaa in dhowr jeer ugu. Sida caadiga ah, waxaan ku jirnaa badan tahay inaad hesho barnaamijka xogta caawimaad ah. Laakiin tan iyo barnaamijyada soo kabashada xogta ee internet-ka ayaa aad u adag in mar walba waa adag tahay in ay doortaan mid ka mid ah na ugu waxtar leh oo lagu kalsoonaan karo. Waa maxay xitaa ka sii daran, inta badan barnaamijyada soo kabashada Xog software bixisay. The versions bilaash ah ama maxkamad iyaga ka mid ah oo kaliya oo aad bixin hawlaha soo kabashada xadidan. Tani dhab ahaantii waa murugo.
Ma jiraan barnaamijka xog ah in uu yahay awood leh, laakiin lacag la'aan ah? Liiska barnaamijyada soo kabashada xogta lacag la'aan ah si fiican halkan diyaarisay. Waxaana soo xulanay 5 freeware kabashada xogta awood badan si aad u doorato ka qodobkan.
Top 2: falsan Data Recovery
Top 1: Recovery File Puran
Recuva waa barnaamij soo kabashada caan ah xogta lacag la'aan ah si gaar ah loogu talagalay Windows. Waxaad isticmaali kartaa hab Wizard ama hab buugga la soo celiyo data lumay ka qalab aad.
The hab Wizard ha idin astaysto nooca raadinta in "dhammaan faylasha", "Picture", "Music", "Documents", "Video", "Tifaftirayaasha" ama "email". Markaas si aad sameyn kartaa meel raadinta meel on your computer.
1 hab saaxir Xoog leh oo faahfaahsan hage;
2 dalalka faahfaahsan oo laga helay files la soo bandhigi doonaa furmo: recoverable ama unrecoverable;
3 Waxaa jira version ah anfacaya in aad ku rakibi on drive USB ah ama ah drive dibadda adag;
4 Waxaa gebi ahaanba bilaash ah, oo waxaa jira farqi u dhexeeya functional version lacag la'aan ah oo ay bixisay version pro lahayn;
4 All Windows OS taageeray: Windows 8, Windows, Windows 2008 Server, Windows Vista, Windows XP, Windows 2003 Server.
1 Ma aha in dhamaan magacyada asalka file waxaa laga heli karaa. Waxa kaliya ee aad ka arki kartaa qaar ka mid ah asalka magacyada file helay,
2 Files aan la saaro noocyada file in hab buugga;
3 Waxaad kaliya ku eegaan karo qaar ka mid ah sawirrada.
Undelete 360 ​​waa utility ah user-friendly oo waxtar leh ku habboon ee dhammaan versions of nidaamka file Windows iyo Windows. Waxay si wax ku ool kabanayso files lumay ay sabab u tahay sababo badan oo la mid ula kac ah ama ula kac ahayn u tirtira, ama software hardware failure, cudurka qoriga, ama xataa nidaamka xiritaanka lama filaan ah. Waxaad kala sooci karaa file helay "Type" ama "Folder". Waxaad u sheegi kara siday dhaawacan file waa sida ay "Xaaladda" column uu furmo.
Waxaa jira version lacag xirfadeed ee barnaamijka. Uma isticmaali kartid "Filter" doorasho, iyo sidoo kale file sort ee "Folder" category, version xorta ah weli waa aalad kabashada xog lagu kalsoonaan karo oo awood leh, waayo, waxaad si loo soo celiyo xogta aad lumay.
1 yaab leh si degdeg ah xawaaraha iskaanka
2 dalalka Clear helin files waxaa lagu soo bandhigaa. Dhammaan files helo waa la ogaaday doonaa xaaladda 'Aad u fiican "red" Overwritten "oo cagaar ah.
1 hawlaha badan oo uu furmo suuqa aan la heli karin, sida "Ha ogolaan in Files", "Group By Folder" iyo "File Kulanka Xiisaha Leh". Waxaad u baahan tahay in la gaarsiiyo in version xirfadeed si ay u dhaqaajiso.
2 dhammaan faylasha Aan ku qoran yihiin magacyada asalka ah. Mararka qaarkood waxa ay ahaan laheyd kugu adag tahay inaad si aad u hesho waxa aad xaqiiqdii doonayaa inaan soo ceshano.
Ka Undeleted 360
Pandora Recovery waa software ah soo kabashada xogta lacag la'aan ah in kabanayso files lumay NTFS oo muda baruurta-formatted. Sidaa daraadeed, waxaad soo kaban karto sawiro, videos, files audio ama dokumentiyada.
Maxaa ka dhigay waxa ay si gaar ah waa in aad isticmaali kartaa madaxda ee files jira iyo tirtiray, ama waxaad isticmaali kartaa ka shaqeynayaan raadinta si aad u hesho file ah la tirtiro, haddii aad xusuusan soo gudbiso magaca, size file, taariikhda abuurka file, ama soo gudbin taariikhda heli soo dhaafay ka dib markii iskaanka. Waxaad ku eegaan karo noocyada file image iyo noocyada file qoraalka labadaba ka hor soo kabsaday.
1 Waxay bixisaa fursado iskaanka kala duwan: "scan Browse" iyo "scan Dhulka";
2 Wizard Mode la tilmaamo faahfaahsan waxaa laga heli karaa;
3 kabanayso xafidayaa, Qarsoon, XP, files Tifaftirayaasha
4 Quick siladda kuu ogolaanaya in aad ku eegaan noocyada file image iyo noocyada file qoraalka;
5 muuqaalada baadhi xunna-loogu talagalay
1 Files aan la saaro noocyada file. Waxaad u baahan tahay si ay u isticmaalaan "baadh" shaqayn joogta ah si aad u hesho waxa aad rabto;
2 utility ma taageeri noocyada file oo dhan,
3 interface ma aha aad u cad in waxa laga yaabaa in waxoogaa yar adag tahay newbie loo isticmaalo.
Hel Pandora Recovery
Data Recovery Falsan waa barnaamij soo kabashada xogta yar oo degdeg ah oo lacag la'aan ah in waddaa on Windows PC. Interface ayaa run ahaantii nadiif ah utility waxay ka caawisaa in aad ka bogsato sawirada tirtiray, videos ama files audio gudahood dhowr qasabno fudud. Menu barnaamijka ayaa nadiif ah ka dhigaysa mid sahlan si aad u ogaato dooro file saxda ah aad rabto in aad soo kabsado.
1 Kanu waa utility yar la interface fududahay in la isticmaalo iyo si degdeg ah xawaaraha iskaanka;
2 recoverability ee file heleen in si cad loo soo bandhigi doonaa in xaaladda "wanaagsan", "Si xun", "Si aad Si xun", ama "Lost";
3 Last modified markii xogta laga badiyay lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka.
1 ma noqon doonaa inaad awoodo inaad ku eegaan helay files;
2 xogta la helay waxaa ku qoran buugga tusaha jirka ahayn ee "Folder" ama qaybaha "File Type".
Hel falsan Data Recovery
Recovery File Puran waa korontada kaa caawinaysaa in aad dib u soo ceshano muhiim shaqada dokumentiyada, sawirada, cajaladaha ama music labada drive deegaanka on your computer ama aaladaha kaydinta dibadda. Waxa aad bixisaa 3 hababka iskaanka: Quick Scan, Deep Scan iyo Full Scan. Ka dib markii iskaanka, waxaad kala sooci karo files ee noocyada file sida "Sawiro", "Music", "Documents", iwm Waxaad sidoo kale yeelan doontaa in ay badbaadin files soo kabsaday qaab Jidka ay dhawrsan. Oo waxyaalahaas oo dhan, Puran File interface cad Recovery ee ka caawisaa in aad ka bogsato oo dhan xogta laga badiyay fudayd.
1 3 muuqaalada iskaanka awood badan waxaa laga heli karaa: Quick Scan, Deep Scan iyo Full Scan;
2 Waxaad astaysto iskaanka sida uu aad u doonayo;
3 Easy sanduuqa raadinta kaa caawinaysaa in aad hesho waxa aad u baahan tahay si degdeg ah.
1 files helay ma saaro "Folder". Waxaad kaliya oo iyaga ka arki kartaa in "Nooca File"
Hel Recovery File Puran
Dhammaan barnaamijyada soo kabashada xogta free Liiskan waxa la isku halayn karo, oo ay ku filan in looga baahan yahay sida caadiga ah soo kabashada xogta tahay. Hadda oo aad leedahay barnaamijyo badan oo soo kabashada xogta lacag la'aan doorasho, waxa la joogaa wakhtigii si aad u dooro ugu haboon in la soo celiyo files aad tirtiray hadda!
Wondershare Data Recovery: Doorashada kale Wonderful Waxaad u
Haddii utilities lacag la'aan ah in liiskan ha ku caawiyaan ama ay dhacdo in aad `leeyihiin Mac ah, waxa kale oo aad qaadan kartaa Wondershare Data Recovery sida isku day ah.
Barnaamijkan kabanayso dhammaan faylasha lumay ka warbaahinta computer ama lagu kaydiyo oo ay ku jiraan kaadhka xusuusta, drive dibadda adag, kaadhka xusuusta, USB drive iyo wixii la mid ah. The technology kabashada sare ee barnaamijka aad muujinaysaa 3 hababka soo kabashada xoog badan, taas oo aan aad ka heli kartaa barnaamijyo lacag la'aan ah:
Lumay Recovery File - Ladnaansho files formatted iyo tirtiray la magacyadooda file asalka iyo waddooyinkiisa.
Recovery Barzakh - ceshano qoruhu ku kharribeen ama laga badiyay, iyadoo dhammaan xogta dhawrsan.
Recovery ceeriin ah - Deep iskaan qalab aad iyo dib u hanato xogta xitaa marka nidaamka file waxaa u kharribmay.
Barnaamijku wuxuu ku siinayaa version xor ah, kaas oo kuu ogolaanaya in aad baarista PC Windows ama Mac u files lumay oo lacag la'aan ah. Haddii aad files lumay waxaa la helay iyo recoverable, waxaad ka iibsan kartaa nooca buuxda ($ 39.95) inuu ka soo kabsado iyaga.